Ukwenza Isikimu seKhamera Yomzimba Worn neSifundo Sifundisiwe | Izixazululo ze-OMG
Ukwenza Isikimu seKhamera Yomzimba Worn neSifundo Sifundisiwe
Ividiyo egqoke umzimba (i-BWV), ebizwa ngenye indlela amakhamera omzimba namakhamera agqoke umzimba, noma amakhamera agqokekayo umsindo ogqokekayo, ividiyo, noma uhlaka lomlando wezithombe. Ngokuphikisana nezinhlobo eziningi ezahlukahlukene zamaphoyisa amasha, amakhamera agqoke umzimba angasebenza kokubili ukuqaliswa komthetho nomsebenzi ovulekile wokuzibophezela. Amakhamera omzimba agqokwa ngamaphoyisa angaba wusizo ekubikeni isimilo esingesihle samaphoyisa nokusetshenziswa kwamandla, kepha ifilimu nayo ingasetshenziswa ukuhlola abantu ababili amaphoyisa azihlanganisa nabo nabangaphandle okungenzeka ukuthi ngeke baqonde ukuthi bayadutshulwa.
Umhlaba uthuthuka ngokuqhubekayo. I-Tech isiphenduke isikhali sezizwe. Ubuchwepheshe bamuva benziwa nsuku zonke. Ucwaningo lwesimanje nezincwadi ziyenzeka emhlabeni wonke njengoba ufunda lokhu khona manje. Amawijethi amasha anamuhla ethulwa kuyo yonke imikhakha yempilo enza impilo ibe lula kithina. Lokhu kunjalo nangobuchwepheshe bekhamera egqoke umzimba (BWC). Lawa mawijethi afakwe emzimbeni womenzeli wezomthetho. Zisetshenziselwa ukuqopha ukuhlangana okutholwa izikhulu nsuku zonke kanye nokuphakelayo okubukhoma kwemishini ethuneni. Manje la makhamera angasetshenziswa kanjani, zithini izincomo zethu maqondana nalokhu futhi yiziphi izifundo esizifundile kuze kube manje ngokuhlangenwe nakho kwethu. Zonke izihloko zihlanganisiwe kule ndatshana ebanzi. Bheka kancane, bese ugcwalisa ukoma kwakho kwesifiso.
Ukufaka ikhamera egqokwa ngumzimba
Ukwenziwa okusha kwamaphoyisa kuphakamisa izingqinamba zezinqubomgomo ezahlukahlukene okufanele zibhekwe. Lokhu kusebenza ikakhulukazi ngamakhamera agqokwa ngomzimba, angaba nokuqhathaniswa okukhulu kude nokuphepha, ukuxhumana kwenethiwekhi, kanye nokusebenza komnyango wezangaphakathi. Njengoba izinhlangano zakha izinhlelo zekhamera egqokwa ngumzimba, kubalulekile ukuthi bahlole ngokucophelela ukuthi izinqubomgomo nezinqubo zabo zihlangana kanjani nale mibuzo emikhulu. Izingqinamba zenqubomgomo okufanele zibhekwe kufaka phakathi ukuthi lawo makhamera abe naluphi ubumfihlo kanye nobudlelwano bomphakathi, ukukhathazeka okuphakanyiswe yizikhulu zangaphambili, okulindelwe ukuthi amakhamera adala ngokuya ngokuqhubeka kwenkantolo nokwethenjwa kwamaphoyisa, kanye nokucatshangelwa kwezimali okwenziwa ngamakhamera.
Ukukhuphuka kwezingcingo zekhamera kuqhubekela phambili emisha yokuqapha, futhi ukuthuthukiswa kwezingosi ezixhumeke kwi-inthanethi kushintshe indlela abantu ababona ngayo ezokuphepha, okunezela kumuzwa wokuthi, njengoba uKhomishani wamaPhoyisa uCharles Ramsey waseFiladelphia esho, uzizwa kaningi njengo “wonke umuntu uthinta wonke umuntu. ” Njengoba izindlela ezintsha ziqhubekela phambili nezifiso zokuvikelwa ziqhubekela phambili, kubalulekile ukuthi izinhlangano ezisebenzisa umthetho ziqaphele ngokuqikelela ukuthi ubuchwepheshe obusebenzisayo bunamthelela muni emalungelweni okuphepha omphakathi, ikakhulukazi lapho izinkantolo zingakakhiphi ukuqondiswa kulezi zinkinga.
Amakhamera agqokwa ngomzimba aphakamisa izingqinamba eziningi zokuphepha ezingakaze zibonwe ngaphambili. Ngokuqhathanisa namasu amaningi okubuka amasiko amaningi, amakhamera agqokwa ngomzimba angaqopha umsindo kanye nevidiyo, ngaphezu kwalokho, abambe izithombe ezisondele kakhulu ezinaka ukusetshenziswa okungase kube khona kokuqashelwa kobuso obusha. Ngaphezu kwalokho, ngenkathi amakhamera okubhekwa esendaweni emile ngokuvamile ahlanganisa nje izikhala zomphakathi, amakhamera agqokwa ngomzimba anikeza izikhulu amandla okuqopha ezindlini zabantu kanye nasezimweni ezithinta amafilimu ezingaba khona ngesikhathi sezingcingo zenkonzo.
Ngabe yini imigomo yokusebenzisa amakhamu agqokwa ngumzimba?
Kukhona nokukhathazeka ngendlela yokuthi ukuqoshwa kwamakhamera agqoke umzimba kungasuswa futhi kusetshenziswe kanjani. Isibonelo, ingabe umuntu angaba nenketho yokuthola ividiyo erekhodwe endlini yomakhelwane? Ngabe izinhlangano zizogcina okuqoshiwe ngokungaqinisekile? Kungenzeka yini ukuthi ifilimu yekhamera egqoke umzimba ingafakwa ngokungafanele kuwebhu? Lapho kwenziwa amakhamera agqoke umzimba, amahhovisi adinga umthetho kumele asuse le micabango yokuvikela ngemfuneko yokuqonda ngqo kwemisebenzi yamaphoyisa, imibhalo eqondile yezikhathi, nokuqoqwa kobufakazi. Lokhu kusho ukuzinza ekukhetheni ngokuqikelela ukuthi iziphathimandla zizodingeka nini ukuthi zisebenzise amakhamera, ukuthi ulwazi olurekhodiwe kufanele lube sezingeni elingakanani, ngubani osondela kokurekhodwayo, ophethe imininingwane eqoshiwe, nokuthi angabhekana kanjani nezicelo zangaphakathi nangaphandle ukuze zidalulwe.
Esixukwini samazwe, izikhulu kudingeka ngokusemthethweni ukuthi zikhanyise izihloko lapho ziqopha futhi zithole imvume yomuntu ngamunye yokurekhoda. Lokhu kwaziwa njengomthetho "wezinhlangothi ezimbili", futhi kungadala izinselelo zokwenza uhlelo lwekhamera olugqoke umzimba. Ezimweni eziningi zemvume yamaqembu amabili, noma ngabe kungenzeka kanjani, izikhulu zamaphoyisa zisebenze ngempumelelo nezinhlangano zazo ezenza imithetho ukuze isidingo semvume sihlehliselwe amakhamera amaphoyisa agqoke umzimba. Isibonelo, ngoFebhuwari 2014 iPennsylvania yagunyaza umthetho odedela imfuneko yamaqembu amabili emaphoyiseni asebenzisa amakhamera agqoke umzimba.
Ama-endaavors ayaqhubeka nokushintsha imithetho yokuvumela yamaqembu amabili ezigcemeni ezahlukahlukene. Lonke ihhovisi kufanele libuze ngemithetho yezwe laso ukunquma ukuthi ngabe kudingeka imvume yamaqembu amabili yini.
Ezinye izikhulu zamaphoyisa ziyakwamukela ukuthi kuwumkhuba omkhulu ukuthi izikhulu zeluleke abantu abathile lapho beqopha, noma ngabe lezo zambulo nakanjani azidingeki ngokomthetho. EGreensboro, ngokwesibonelo, abaphathi bayasekelwa - kungenzeka ukuthi njengoba kungenjalo, kungadingeki — ukubika lapho beqopha. UBoss Miller wase Greensboro uthe leli lungiselelo lincike ekuqinisekeni ukuthi imininingwane eqhutshwa ngamakhamera ingasiza ekuchazeni izimo ezithukuthele kakhulu futhi ithuthukise nokuziphatha kuyo yonke imibuthano.
Lezi zinto ezimbalwa kufanele zikhunjulwe uma usebenzisa ikhamera egqoke umzimba emsebenzini noma lapho uhulumeni esebenzisa lobuchwepheshe emaphoyiseni noma kwamanye amabutho ahlomile. Manje, ake sibheke ezinye izincomo esikulungiselele zona uma uzama ukusebenzisa amakhamera agqokwa ngomzimba.
Iziphakamiso zokusebenzisa amakhamera agqokwa ngomzimba
Nazi ezinye izincomo esicabanga ukuthi kufanele zabiwe nawe, uma ucabanga ukufaka amakhamera agqokwa ngomzimba emsebenzini wakho.
Izinqubomgomo kufanele kube yi-100% kucace ukuthi yibaphi abasebenzi abaqokiwe noma abavunyelwe ukugqoka amakhamera agqokwa ngomzimba futhi ngaphansi kwaziphi izimo.
Ngabe kufanele kube esifubeni, ekhanda, ezinesibuko, ehlombe, emgqonyeni noma ohlangothini lwesibhamu?
Iziphathimandla ezisebenza zisebenzise ikhamera egqoke umzimba ngenkathi zisemsebenzini kufanele zinake ukuthi kukhona ukuqoshwa kombiko wesigameko esisemthethweni.
Iziphathimandla kufanele zicelwe ukweluleka izifundo uma ziqoshwa ngaphandle kokuthi ukwenza kanjalo kungaba yingozi, kungenangqondo, noma kungenzeki.
Ithuba lokuthi inhlangano ibeke amakhamera ezikhundleni endaweni enamabomu, izinqubomgomo kufanele zichaze noma yiziphi izimo ezicacile lapho isikhulu kungadingeka ukuthi sigqoke kuso.
Iziphathimandla ezigqoka amakhamera agqokwa ngomzimba kufanele zicelwe ukuveza kwikhamera noma ekubhaleni isizathu sazo uma zinganaki ukuqopha ukunyakaza okudingwa yinqubomgomo yehhovisi ukuthi kuqoshwe.
Idatha kufanele ilandwe kwikhamera egqokwa ngumzimba ngasekupheleni kokushintshwa ngakunye lapho ikhamera isetshenziswe khona.
Njengenqubomgomo ejwayelekile yokuqoshwa, izikhulu kufanele zinikeze amakhamera wazo agqoke umzimba uma ephendula kuzo zonke izingcingo zezinsizakalo nangawo wonke umthetho, okuhlangenwe nakho okuhlobene nokuzivocavoca okwenzeka ngenkathi isikhulu sisemsebenzini.
Izinhlangano akufanele zivumele ubuhlakani ukusebenzisa amakhamera agqokwa ngomzimba ngenkathi esemsebenzini.
Izinqubomgomo kufanele zichaze indawo esemzimbeni lapho kudingeka khona la makamu ukuthi atshalwe.
Izinqubomgomo eziqinile kufanele zigcinelwe ukuphazanyiswa kwedatha, ukususa, kanye nokukopisha i-footage.
Iziphathimandla kufanele zihlukanise kahle futhi zenze umaki amavidiyo ekhamera egqoke umzimba ngesikhathi ezilandiwe. Amavidiyo athungelwe kufanele afakwe kuhlu lwemibhalo ngokuya ngohlobo lokwenzeka. Kungenzeka ukuthi kwakuwukubamba inkunzi, ukubulala, noma icala lokushaya?
Umgomo osobala kufanele uchazwe uchaza ukuthi ukuqoshwa kufanele kubanjelwe kuphi.
Iziphathimandla kufanele zivunyelwe ukubuka isithombe esirekhodiwe ngaphambi kokubeka leso sikhulu phambi kwekhamera, kufanele sibe nethuba lokuhlola isithombe esirekhodwe kwikhamera yakhe.
Izinqubomgomo kufanele zichaze lapho umphathi engabheka khona ukwelashwa komzimba wesikhulu sakhe esiphansi.
Ngokusekelwe kulwazi lwethu, sifunde ezinye izifundo ekubhekeni ama-ejensi asaphaza noma afake izinsimbi ezigqokwa ngumzimba emikhakheni yazo. Kuyabonakala ukuthi izinhlangano zifaka izinsimbi zomzimba kulaba bantu abanesikhathi esiningi esichithwa nomphakathi, onolwazi oluningi nabantu.
Amahhovisi ambalwa abika ukuthi ukuhlola nokubhala imininingwane eqoshiwe kungaba inqubo eyisicefe ethambekele ekwenzeni amaphutha abantu. Inhlangano eyodwa ithambekele kulolu daba ngokusebenzisana nomdidiyeli wekhamera ukwakha inqubo yekhompyutha exhuma imininingwane erekhodiwe kumarekhodi ehhovisi kohlaka lwebhodi. Ezinye izinhlaka zekhamera nazo zingaxhunywa kumathebulethi kagesi angasetshenziswa ngabaphathi ukucwaninga nokubhala imininingwane eqoshiwe besesensimini.
Abaphathi bamaphoyisa nabaphenyi babika ukuthi ababanga nazingqinamba kuze kube manje ngokusebenzisa umthengisi wangaphandle ukuqaphela imininingwane erekhodiwe ngefu eliku-inthanethi, inqobo nje uma uchungechunge lwamaphoyisa lungalungiswa ngokufanele.
Amahhovisi amaphoyisa kufanele athathe indlela eqinile yokubhekana nokusebenzisa uhlelo lwekhamera egqoke umzimba. Lokhu kusho ukuvivinya amakhamera kumaphrojekthi wokuhlola nokudweba kwizikhulu nasemphakathini ngesikhathi sokuvivinya komzimba. Ngaphezu kwalokho kusho ngokucophelela ukwenza amakhamera agqokwa ngomzimba asondele ezingeni lesibopho, ukucaca, namalungelo wobumfihlo ngenkathi kulondolozwa ubuhlobo obalulekile obukhona phakathi kwezikhulu nabantu abavela emphakathini.
Ukwenza Isikimu seKhamera Yomzimba Worn neSifundo Sifundisiwe igcine ukuguqulwa: I-December 5th, i-2019 by admin
Ukubuka okuphelele kwe-3628 Ukubuka kwe-5 Namuhla